घर मा चाक लागि प्रभावकारी अभ्यास
सबै मानिसहरूको कि पहिलो मा केटी संग एक बैठक देखो? निस्सन्देह, नजरमा! तर मात्र। पुष्ट संग सुन्दर ट्रिम आंकडा जांघों र चाक मदत तर दृष्टि आकर्षित गर्न सक्दैन। तपाईं ध्यान र compliments को केन्द्र हुन चाहनुहुन्छ भने त, खेल मित्र हुनुपर्छ। छैन आवश्यक फिटनेस केन्द्र एक सदस्यता खरीद, तपाईं घर मा चाक लागि अभ्यास गर्न र छोटो समयमा धेरै राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं एउटा देखावटी मालिक बन्न कटिबद्ध छन् भने लोचदार पूजाहारीहरू, गम्भीर यो कुरा विचार गर्नुहोस्। तत्काल परिणाम आशा छैन, तपाईं काम र कार्य सुरु गर्न ट्युन गर्न आवश्यक छ। यो लक्ष्य हामी व्यायाम, शक्ति समायोजन बनाउन र सौन्दर्य उपचार को एक किसिम प्रयोग गर्न चाक को मांसपेशिहरु बलियो बनाउन चयन हासिल गर्न। यो एकीकृत दृष्टिकोण बस समतल मृदु गधा मौका छोड्न हुनेछ, र चाँडै हामी लोचदार convex पाँचौं बिन्दु पराउँछु हुनेछ।
को चाक लागि घर अभ्यास
कार्य सामना गर्न, तपाईं व्यायाम को एक किसिम प्रदर्शन गर्न सक्छन्। सबैभन्दा ती प्रभावकारी - एक फलाम को दंड संग lunges वा dumbbells। स्टक उपलब्ध छैन भने, तपाईंले जटिलताहरू लागि पानी दुई बोतल लाग्न सक्छ।
आफ्नो खुट्टा अलग काँध-चौडाइ: स्थिति सुरु गर्दै। हामी एक खुट्टा मा अगाडी ठूलो चरण र उठबस बनाउन; जांघ तल्ला गर्न समानान्तर हुनुपर्छ। त्यसपछि तल र फिर्ता बन्द खुट्टा repelled। त्यसै गरी, अन्य खुट्टा संग lunging। हामी प्रत्येक खुट्टा बारेमा 3-4 दृष्टिकोण संग 12 पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या गर्छन्।
को चाक लागि राम्रो व्यायाम उठबस - जो पनि जांघों को मांसपेशिहरु समावेश घरमा। बोतल को सट्टा पुस्तकहरू एक झोला धारण गर्न सकिन्छ। उठबस, तल्ला बन्द एडी राखन तल्ला गर्न समानान्तर कूल्हों को स्थिति। 15 प्रतिनिधि को4सेट गर्न पर्याप्त।
त्यहाँ घर मा चाक अन्य अभ्यास हो। उदाहरणका लागि, आफ्नो खुट्टामा बर्खास्त फिर्ता। यसलाई विशेष किन्न राम्रो छ आफ्नो खुट्टामा वजन सबै भन्दा राम्रो प्रभाव लागि। Mahi पनि एकांतर आफ्नो खुट्टा उठाने, सबै चौका मा गर्न सकिन्छ।
प्रभावकारी र यो व्यायाम: को चटाई आफ्नो पछाडि झूट, खुट्टा झुकेको; को श्रोणि अप उचाल्न तेज आन्दोलन, अधिकतम चाक straining; केहि सेकेन्ड को लागि माथि रहन; सुस्त।
तथापि, सुन्दर लागि घर मा चाक लागि मात्र बल अभ्यास गर्न पर्याप्त पूजाहारीहरू छ। एरोविक्स शरीर बोसो र सेल्युलाईट कम गर्न जडान गर्नुपर्छ। तपाईं एक साइकल सवारी बाहिर वा स्टेश्नरी; एक brisk गति वा चालु मा सामान्य पैदल; सिढी चढाई, वा प्रशिक्षण गर्ने अण्डाकार प्रशिक्षक तपाईं कुनै न कुनै छाला विदाई भन्न गर्नेछ। एक वार्मिंग संग छाला टोन प्रदर्शन मालिश र विभिन्न लपेटन कायम राख्ने वा प्रभाव ठंडा लागि। मांसपेशिहरु कारण गोलाकार चाक गर्न, पोषण संशोधन। मिठाई र रोटी को आहार हटाउन, अधिक प्रोटिन र तरकारी थप्नुहोस्। थप पानी पिउन र एक क्षण कहिल्यै परिणाम शङ्का! व्यवस्थित अध्ययन र सकारात्मक रवैया छोटो समयमा आफ्नो सपना पूजाहारीहरूले मालिक बन्न अनुमति दिन्छ।
Bodyflex: प्रणालीको एक समीक्षा, विशेषज्ञ राय आधारित
Leggins Slimming शारीरिक Shaper छ (हट Shapers): समीक्षा
क्यानाडा, टोरन्टो आकर्षण। विवरण र फोटो
इन्फोभिरस संक्रमणको लक्षणहरू के हुन्
हेजेल - एक shrub वा रूख? विवरण हेजेल र फोटो
अर्थव्यवस्था मा TNCs। TNK - यो ...
सफलता हासिल गर्ने विकलांग मान्छे (फोटो)
हुक्का विद्युतीय उपकरण: एक संक्षिप्त विवरण